Jungar गेट्स - दुई पहाड दायरा बीच छेद। उनको सीमा? एक हात Jungar Alatau मा, र अन्य मा - एक रिज Barlyk।
गलियारे दक्षिण उत्तर फैलिएको र काजाकिस्तान र चीन बीच सीमा छ। एक दर्जन किलोमिटर एक चौडाई Jungar ढोकाहरू छन्। आफ्नो लम्बाइ पचास किलोमिटर पुग्छ। Chingiskhanovy र Hun: यी ढोकाहरू अझै पनि केही नाम हुन्। यो भू-भाग निर्जीव हुन मानिन्छ। त्यो मान्छे को लागि एक प्रतिकूल जलवायु र राजनीतिक केन्द्र देखि धेरै टाढा छ।
यी ठाउँहरू भ्रमण गर्ने मानिसहरू यी क्षेत्रहरूको originality र पहिचान मनाउन। केही यस खण्डमा तुलना गर्ने घडी मा एक पुल संग, र अरूलाई खराब र कालो स्पट विचार गर्नुहोस्।
पूर्व देखि - Jungar Alatau, जसको उचाइ 2000 मिटर भन्दा बढि छ, पश्चिम र रिज Barlyk देखि गेट encloses। खण्डलाई Junggar फाँटमा र Balkhash-Alakol बेसिन हुन्छन्।
धेरै पोखरी गलियारे मा स्थित छ। उत्तरी प्रवेश मा त्यहाँ एउटा सानो Alakol छ, र दक्षिण मा - Ebi लेक। Zhalanashkol को Jungar गेट्स को उत्तरी भाग मा ठाँउ लिन्छ, तर प्रवेश गर्न अर्को छैन। उत्तरी मा Alakol ताल सानो टापु छ, मान्छे छैन यो किनभने त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय द्वारा सुरक्षित छ जो gulls, एक दुर्लभ लोपुन्मुख जाती बसोबास भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ।
चीन र काजाकिस्तान यस खण्डमा एक रेलवे स्टेशन छ। को छेद केन्द्र काजाकिस्तान Dostyk छ। Alashankou स्टेशन दक्षिणी भाग मा स्थित छ। यो Lanzhou-शिन्जियाङ रेलवे बुझाउँछ। स्टेशन Druzhba (Dostyk) पछिको लगभग 20 सय मान्छे को जनसंख्या संग, एउटा सानो गाउँ हो। एकै समयमा मानिसहरू धेरै अन्य क्षेत्रहरु मा काम गर्न आ।
मूलतः मध्य एशिया बाट nomads सडक रूपमा Jungar गेट्स प्रयोग। त्यसै गरी काजाकिस्तान को मान्छे गरे। त्यसपछि, Jungar गेट्स महान् सिल्क रोड बित्यो।
मूलतः यस खण्डमा युरोप मा आन्दोलन को लागि प्रयोग भएको थियो। Conversely, कुनै एक कहिल्यै फर्के।
को XIII शताब्दी Zolotaya Orda मा, Genghis खान नेतृत्व मध्य एशिया मा विजय अभियान लागि Jungar गेट्स प्रयोग। अझै पनि यो गलियारे मा फिट भन्ने छैन, तर प्रणाली पनि stepping सेना विजयी, युरोप जित्न गए।
पछि यो क्षेत्रमा त्यहाँ सोभियत संघ र चीन को सिमाना सेना बीच एक संघर्ष थियो। यो कारण सैन्य अन्तिम नाम राज्य द्वारा सीमाना उल्लङ्घनको थियो। यो मतभेद सोभियत सेना को विजय संग समाप्त, र अपराधियों आफ्नो सीमाना फर्के। अब शान्तिमा बाँच्न चीन, काजकस्तान।
को बीसौँ शताब्दीको दोस्रो आधा मा, रेलवे को Jungar गेट्स को क्षेत्र मा बनाइएको थियो। त्यो युरोप र एशिया बीच निकटतम मार्ग भयो। यो ट्रांस एशियाली रेलवे भनिन्छ गर्नुपर्छ। त्यो दुई छिमेकी देशहरू बीच शान्ति र मित्रताको समेकन भयो।
यो क्षेत्र को मुख्य climatic सुविधाहरू Jungar गेट्स मार्फत उड्ने बतास छन्। तिनीहरूले तिनीहरूको बल र शक्ति प्रभावित। हावा को गति 70 किमी / घन्टा छ। कारण यस्तो आँधी बेला क्षेत्र को सूक्खापना र अर्ध-मरुभूमि जलवायु गर्न बलियो बालुवाको आन्धीबेहेरी हुँदैछ। आँधी अचानक सुरु र धेरै क्षणिक हो। यी आँधीबेहरी पछि नै मौसम पहिले जस्तो आउँछ। पछिल्लो आँधीको संकेत रहनेछ।
यो पहाड र फाँटमा को सह-स्थान कारण हो। खण्डमा एक विशाल पाइप रूपमा गठन गरिएको छ। त्यसैले, एक संकीर्ण crevice मार्फत हावा बित्दै जाँदा को आन्दोलन, Narrows र त्यसपछि धेरै छिटो प्रवाह गठन, जोडले widens गर्दा।
हरेक हावा यसको आफ्नै नाम छ। हावा हिउँदमा चीन देखि सार्दा छ, IBE भनिन्छ। Saykanom को कजाख steppes मा मौसम को परिवर्तन बेला उत्तर-पश्चिम तर्फ देखि blows कि हावा भनिन्छ।
यो ठाउँमा कहिलेकाहीं Shaitan फेला परेन। यो बलियो आँधी बालुवा को तात्दै कारण छ। यो पनि भारत र पाकिस्तान मा पाइन्छ।
यस्तो असामान्य जलवायु को अधिकारीहरु अर्को चाँडै निर्माण गरिनेछ बोट, बिजुली उत्पन्न गर्न हावा ऊर्जा प्रयोग गर्नेछ जो उत्तरी प्रवेश गर्न, आफूलाई लागि कार्य गर्न निर्णय गरे।
अर्को रोचक तथ्य, कि तपाईं जमीन मा झूठ भने, तपाईं निकै गरम करना सक्छ, र खडा नै ठाउँमा भने, एक चिसो फसाउन सबै सम्भावना छ। Scorching सूर्य कडा सतह heats। यस मामला मा, हावा हावा को heats भन्दा छिटो cooled छ भनेर चिसो छ।
Jungar ढोकाहरू। रोचक तथ्य
अब हामी यस क्षेत्रमा बारेमा तथ्य हेर्न।
Jungar गेट्स - संसारको समुद्रहरू टाढा छ कि एक क्षेत्र। ठूलो पानी संसारको कुनै पनि भाग यस छेद भन्दा नजिक छ।
यस खण्डमा को सीमा हावा द्वारा निर्धारण गर्न सकिँदैन। तपाईं Jungar गेट्स लग इन गर्नुहोस् यदि, तपाईं हावा महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं फिर्ता सीमाना पार भने - यो गायब हुनेछ। गेट बाहिर हावा वा हुन, वा यो धेरै शान्त छ।
को Meadows धेरै अग्लो घाँस। यो क्षेत्र जीवनमा मान्छे धेरै केहि, र भएकोले त्यसैले, गाई, पनि सानो राख्नुहोस्, घाँस खाएको छैन कुल्चनेछन् गर्दैन, र केही अरू फिर्ता यसको वृद्धि समातेर। त्यो औसत मानव उचाइ माथि माथि बढ्न प्रबन्धन। सैन्य जासुसले लुकाउन ठूलो ठाउँ।
त्यहाँ गाउँमा प्रहरी। किनभने यस क्षेत्रमा सानो जनसंख्या छैन प्रहरी स्टेशन राख्न लाभदायक छ। मुख्य रेलवे स्टेशन, र सैन्य र सीमाना गार्ड मा ईन्जिनियरहरु आवश्यक भएमा निम्न प्रक्रिया समयमा। तर अपराध, अझै पनि कम छ अवैध आप्रवासी गणना छैन।
यहाँ तपाईँले चीन देख्न सक्छौं। बस ट्रयाक बाहिर चीन, सीमा क्षेत्र हो, जो संग सिमाना छ। आफ्नो adaptability द्वारा तिनीहरूले नाटो भन्दा झन् खराब छन्। कुनै Fadrique, गगनचुम्बी भवनहरू र यो देश को संस्कृति को अन्य प्रमुख प्रतिनिधिहरु त्यहाँ छ, तर यो अझै पनि चीन छ।
त्यहाँ एक रिसोर्टमा छ। को गर्मी मा एक ताल को किनारमा हलिडे भरिएका छन्, र पानी को अर्को शरीर अर्को उपचारात्मक माटोको छ। मान्छे सबै रूस देखि र काजाकिस्तान भन्दा सबै यहाँ आउनुहोस्।
यो रिसोर्ट बस 1 स्टोर। यो सबै कुरा किन्न सम्भव छ। भोजन, लुगाफाटा, औषधि, घरेलू रसायन, व्यक्तिगत हेरविचार उत्पादन, स्टेशनरी - यो स्टोर छ।
बच्चाहरु वयस्क बढी छन्। सबै सरल छ। परिवार भन्दा बढी तीन छोराछोरी प्रत्येक छ।
शंकास्पद बासिन्दा। विपरीत मानक रूसी गाउँमा, मान्छे विरोधी, आगंतुकों विश्वास छैन। तिनीहरूले अन्य मानिसहरू तिनीहरूलाई प्राप्त छैन भन्ने विश्वास गर्छन्। स्थानीय पर्यटकहरु आफ्नो घर हानि गर्न चाहनुहुन्छ कि विचार गर्नुहोस्।
परिदृश्य को एक विशाल विविधता। यहाँ marshes shelterbelts संग Meadows रह। लगभग यी ठाउँहरू हरेक 100 मीटर एकान्तरण।
अब तपाईं के तिनीहरूले रुचि हो Dzhungaskie फाटक, तिनीहरू कहाँ छन्, हो भनेर थाह छ। पनि हामी आफ्नो इतिहास र तथ्य यो लेखमा सम्झौता। हामी जानकारी उपयोगी छ भन्ने आशा।
पुरातन माछा crossopterygian
Molokanka - च्याउ-जस्तो agaric। खाना पकाउने मशरूम molokanok
उत्तर काकेशस को प्राकृतिक परिसर। उत्तर काकेशस को रिजर्व
संसारको सबैभन्दा पुरानो शार्क - Megalodon
मण्डली वर्गीकरणका - पादरीहरूले रोष्टर
मई मा स्पेन मा बिदाहरू: तस्बिर र समीक्षा
जलजीवालय माछा platies - कुनै पनि घर को सजावट
कति सुन्दर sfotkatsya? शुरुआती लागि सुझाव।
2013 मा गर्मी लुगा - यो स्त्रीत्व र रोमान्स
Patellar dislocation: कारण, लक्षण, उपचार र पुनःस्थापना
Konstantin Petrovich Feoktistov: जीवनी, पुरस्कार
काठ मशरूम: स्वादिष्ट व्यञ्जन लागि व्यञ्जनहरु
एप्पल iPhone एसई स्मार्टफोन: समीक्षा, विनिर्देशों